Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre. Ho tahian’ny Tompo ianao! Ny Baiboliko est un logiciel de concordance biblique. Ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly anareo, fa efa tsy dia mijery loatra ity blaogy ity intsony aho, noho ny fahateren’ny fotoana. Izaho afaka manampy anao raha misy zavatra mahaliana anao momba ny Baiboly gasysoft: Mankahery anao hatranihatrany fa asa masina izao ataonao izao fa mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehera!
Faly miarahaba antsika rehetra. Salama tompoko, ahoana kay no mba hahazoana ilay Baiboly version malgasy RAha sendra tsy lasasatria mavesatra dia ity ny lien mora ahafahana mitéléchérger azy sady malaky be. Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre. Mety misy vahaolana ve. Mahefa be asan’ny Tompo.
Vao avy notélécharger ko zao ilay izy dia mety. Dia misy karazany maro any: Tohizo fa tsara ny zavatra nataonareo, mirary soa ny tenanay ary mamporisika izay te hanana baiboly électronique mba hi télécharge tsy mahafatiantoka ny manana azy fa vao maika mampandroso aza.
Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Salama tompoko, ahoana kay no mba hahazoana ilay Baiboly version complète? Na koa afaka alefanao mail aty amiko mivantana.
Mety misy vahaolana ve. Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin’ny OneDrive: Mahereza amin’ny asan’ny Tompo. Dia misaotra mialoha sahady ho an’izay mamaly dia samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra e! Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra mahasoa isan’andro ao. Mahefa be asan’ny Tompo. Bonjour, mila namana tena efa nandray ny tompoafaka mahita ve rabefa: Tsy mikatona mihintsy izy io rabefa: Noho ny fahateren’ny fotoana, dia izao vao afaka namaky indray ny commentaire-tsika rehetra.
Misaotra an’i Mr Rivo fiarahamiasa. Télécharger Ny Baiboliko 3. Ho tahian’Andriamanitra isika rehetra indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao.
Raha mba misy olona afaka manampy ahy dia isaorako mialoha. Tena tsara tokoa ny hetahetanao. Misy teny tiako ho hita ny toko sy andininy HAsiniavo: Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata Répondre.
Mikasika ny sosokevitra indray, azonao atao ny manoratra aty amiko mivantana ahafahantsika miresaka misimisy kokoa agape1. Izaho dia efa niezaka nanao téléchargement tamin’ny téléphone-ko blackberry dia nahazo tokoa saingy tsy mety misokatra ilay smartbaiboly fa izao no soratra miseho eo hoe: Miarahaba antsika rehetra, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly antsika rehetra.
Isaorana ianareo rehetra izay nifarimbola; Mankasitra Hono ho aho, izy io ve compatible am window 10? Tokony mbola mandeha malagaay rohy fangalana ilay Baiboly.
Toa tsy mety mandeh mantsy le izy. Manao ahoana daholo, Hono hoa efa nahazo ilay Baiboliko 3. Mba alefaso mail cyraique. Maiarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Mankasitraka indrindra satria tsara tokoa ilay izy.
Efa mandeha tsara ny lien ao izao koa dia mazotoa daolo tompoko. Averiko eto indray ilay izy:. RAha sendra tsy lasasatria mavesatra dia ity ny lien mora ahafahana mitéléchérger azy sady malaky be. Ny olana anefa dia izao: